Philippines: Hevitra taorian’ny fialan’ny fialan’ny filohan’ny Vaomieran’ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2007 17:23 GMT
Nivelatra be tao anatin’ny fotoana fohy ny raharaha maizina nentin’i Mong Palatino nananika ny lapan’ny filoha
Niala tsy satry tamin’ny andraikitra mahafilohan’ny Vaomieran’ny fifidianana azy manko i Benjamin Abalos tamin’ny alatsinainy rehefa voarohirohy nanao zavatra tsy mazava tamin’ny National Broadband Network (NBN) [Fanapariahana ny onjan-tseraseram-pirenena].
Tao amin’ny Lapan’ny antenimieran-doholona tamin’ny herinandro lasa teo no nampangain’ny filohan’ny vaomieran’ny fampianarana ambony Atoa Romulo Neri minisitry ny fandrindrana ekonomika sy sosialy teo aloha ho nikasa hanome tsolotra azy Atoa Abalos mba hahazoan’ny orinasa shinoa ZTE ny fitantanana ny $329.000.000 amerikana entina hananganana ny NBN ho an’ny Filipina.
Nolazain’i Neri tamin’ny loholona fa tanelanelan’ny resaka teo ampilalaovana golf no nisy tsipalotra momba ny NBN: ” Sec, may 200 ka dito” (Misy 200 ho anao Atoa Minisitra ao). Nambaran’Atoa Neri mazava tamin’ny loholona fa 200.000.000 pesos no dikan’izany.
Ny mpiblaogy sy mpitondra tenin’ny vaomieran’ny fifidianana James Jimenez no nanoratra ny fametrahan’Atoa Abalos fialana ka nisintona ny saina tamin’ny fanonaniana sady fanamarihana nataon’ny lehibeny taloha minitra vitsy taorian’ny filazana ampahibemaso hita tamin’ny fahitalavi-pirenena:
a welcome development that should be accepted by those crying for Abalos’s head eversince:
Famelabelarana tokony eken’ireo nitady hanaisotra an’i Abalos hatry ny ela :
Ho an’ireo izay nitaky ny fialany efa an-taonany izao, aza manao tsindrio fa lavo azy. Niala izy mba tsy ho tratry ny fahafaham-baraka, saingy efa niala izy. Derao tamin’ny fanapahan-keviny izy. Fa ny dingana sarotra kokoa dia ny hitondra azy any amin’ny fitsarana. Ny fiderana ny nataony dia noho ny fialany ary izay ihany no iderana azy. Amin’ny firenena izay vitsy loatra ny mahasahy mametra-pialana na dia maro aza ireo takian’ny feom-bahoaka, dia nahasahy izy ; aleony miala toy izay azon’ny fanesorana mety hanan-tantara. Ary manaraka ihany koa ny fitsarana manan-tantara.
Angamba anisan’ireo nitaky ny fialan’Atoa Abalos i My name is Daaaviiiiid…izay nizara fa:
Izay no efa nandrasako taminy hatry ny ny ela. Raha tianao hojerena araka ny fahafahanao ao amin’ny siniben-tserasera ny vitany dia tsy ho gaga intsony ianao raha mahita ireo fihetsika…mampieritreritra vitany.
Raha raisina ny resaka kolikoly, Nisy fanontaniana lehibe natrangan’i Philiblogs.com :
Niantsoantso i Abalos fa hanohy ny kroazady (tafika masina) hanadiovana ny anarany sy ny lazany. Teni-pahamendrehana izany tompoko ! Fa iza kosa no hanadio ny anarana sy ny lazan’i Filipina mihosina ao amin’ny fahafaham-barakan’ny firenena anjakan’ny kolikoly noho ity raharaha maizina ity ?
Tsy nitsitsy teny koa i Ideological Soup tao amin’ny fiteny tena mandratra taorian’ny fialan’Atoa Abalos:
Kivy tanteraka aho tamin’ny fomba nametrahan’i Abalos fialana, indrindra moa rehefa nanasongadina ny teny hoe « hanadio ny anarako sy ny lazako » izy. Efa matroky ny heloka mihoatra lavitra noho izay azo eritreretina ny kroazady kasainy hanadiovana ny anarany. Ny tantra koa dia mbola hitsara, tsy hanaiky izay fanovana tian-katao. Ary zavatra tsy voavidy na oviana na oviana ny laza na dia hanome tsolotra 200.000.000 na 200.000.000.000 hahatsara laza anao aza ianao.
Na dia ny mpiasan’ny vaomieran’ny fifidianana lazaina fa mitsinjatsinjaky ny hafaliana rehefa nandre ny fialan’ny lehibeny.Manahy kosa i Oragon. Ankoatra ny heloka telo loha mahatafiditra dia niteny i Oragon :
Mety ho fiarahan’ny paik’ady anaty lalàna sy tetipanorona politika ny fametraham-pialana. Ny paika dia ny itadiavana sehatra ahafahan’i Abalos maka aina, ny tetika kobonina dia ny hanoroana lalana ny mpitarika politika rehetra mety ho tratran’ny raharaha maizina hoe mankary ny sehatra ahafahana maka aina.Tapi-dala-kaleha tokoa manko ny antenimieram-pirenena saiky hanongana an’i Abalos raha vao nametra-pialana ity farany, izany hoe, (saika) hitazona azy ho manana andraikitra politika tamin’izay nataon’i Abalos hahatontosa ny fifanarahana NBN sy ny ZTE.
christabel kosa very finoana. Henoy ny fitenenany tahaka ny voatery anelanelan’ny fisainana mpianatra tia basket sy fampisehoan-kira
Like some Filipinos, I don’t know what to believe anymore. I’m still waiting for further events and I just pray one thing, for the truth to be set out and for corruption to end but just some time ago, the Philippines was named as one of the most corrupt countries in the world today. It’s very disappointing.
Tahaka ny Filipiana maro ihany aho, tsy fantatro intsony izay azo inoana. Mbola miandry ny tohin’ny raharaha aho ary mivavaka zavatra iray loha : mba hivoaka ny marina ary mba hitsahatra ny kolikoly, saingy efa tokony ho fotoana vitsy lasa izay, voatondro ho firenena anjakan’ny tsolotra indrindra manera-tany i Filipina. Mahaketraka !
Ny ekipan’ny Philippine Center for Investigative Journalism kosa maheno fofom-boalavo ary miahiahy fa tsy mahita fahasamihafana amin’izay nataon’i Richard Nixon’s amin’ity raharaha ity.
Cradle of the Brave,[Rotsirotsin’ny sahisahy] no itateran’ny mpanao gazety Reeza Singzon ny tafatafa tamina mpahay lalàna:
NItafatafa tamin’ilay mpana-toetra bonaika sy malefa-piteny tao amin’ny Fitsarana ambony efa misotro ronono aho, Ny mpitsara Santiago Javier Ranada, natsidiko taminy ny raharaha ary hoy aho hoe : « Ankehitriny moa efa tsy ao anatin’ny olona fanongana intsony izy, izy ihany izany no nanokatra ny raharaha amin’ny heloka bevava iampangana azy ».
Namaly ny mpitsara Ranada : « Mety ho marina izany, saingy tadidio fa ny fialana tsy midika ho fiaiken-keloka. »
Niady hevitra tamin’io fitadidy (fampitandremana) i Reeza :
Mbola lavitra ny lalana alehan’ny mpanenjika an’i Abalos raha tiany ny hahazo ny lohany eo an-dovia. I Abalos aza no tena fetsy ao anatin’ity raharaha ity, fantany tsara fa raha tankina ny lalam-panonganana dia ho sarotra mandrakariva ny hanaporofo ny fisian’ny fandikan-dalàna heverina ho nataony. –Ankoatra ny ahiahy hoe hoe hitsara tsy miangatra amim-pahamarinana tokoa ny Fitsarana – [Miaro azy] ny Politika avo lenta sy ny lesoky lalam-panonganana.
Mety hananan’ny maro izay fomba fijery be ahiahy izay, raha jerena ny mety ho mpikambana ao amin’ny fitondrana voarohirohy amin’ity raharaha ity. Tahaka izay efa nolazaiko mialoha, mety handiso fanantenana indray ny mpanelanelana (mediatora) raha jerena izay efa niampangana ny Vaomieran’ny fifidianana izay notarihin’i Abalos.
Ho an’ny AWBHoldings, Abalos no voatendry ho lohan’ny mpanangana ny rindrin’ny Henatra amin’ity taona ity.
Antenaina hanohy ny fanadihadiana ny antenimieran-doholona mandra-pahazoana ny marina rehetra. Mety hahazo teny mahery amin’ny antenimiera ny olo-manan-kaja voalhany Mike Arroyo, ary raha tsy miraharaha ny teny izy dia mety hosamborina ary voatery hiatrika ny fanadihadian’ny loholona.
Raha anarivoarivony ny mpivoivoy amin’ny aterineto, vitsy amin’ireo monja no mahafantatra ny volavolam-panorenana NBN sy ny tanjona tratrariny. Mieritreritra aho fa tena volavola tsara tokoa ny mampifandray ny ny sampan-draharaham-panjakana rehetra, na an’ny faritra io na misahana ny firenena manontolo, ary mahatratra ny sekoly sy ny fandraharahana rehetra. Efa nisy ny volavola notanterahina tahaka ity tany amin’ny firenen-kafa toa an’i Australia ary nahatalanjona tokoa ny zavabitany. Ny olana dia ny kendren’ny governemanta atao azy ho lasa tsy tian’ny olona, manao petatoko [dika bontolo: mitaingina amin’ny zavatra efa mitaingina (grefy)] ary malaza ho tsy mahavita zavatra sy tsy mahay, hany ka ny vinavinam-pananganana ny ny NBN indray no voaompa fa izay kasihan’i Midas dia mivadika (ambony ambany) avokoa.
Mba hahafantarana bebe kokoa sy ahalalanao ny vaovao farany momba ny NBN dia tsidiho aza fady ny Inquirer.net’s NBN microsite. I Tek 4 d Pipol nanoratra ny Fijery misolo, tsia, fijery mivoatra momba ny NBN ho an’i Philippines . Dia hoy ny fizisiana Dr. Giovanni Tapang izay mampahatsiahy antsika ao amin’ny blaoginy Penguin tales:
Fampivoarana ny fifandraisandavitra amin’ny alalan’ny fampiasana haitao maoderina, tsy misy kolikoly sy tombotsoa vahiny, no iriana hampandrosoana ny vahoaka.Ekeko izany.